GAROOWE, Puntland - Madaxweynaha dowladda Puntland, Cabdiwali Maxamed Cali Gaas, oo goordhow warbaahinta shir jaraa’id ugu qabtay xarunta Madaxtooyada ayaa ka hadlay dagaal maamulka Somaliland uu kusoo qaaday deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool, halkaasoo ay ku sugnaayeen ciidamo katirsan Puntland.
Gaas ayaa shir saxaafadeedkiisan ku dhaliilay Somaliland oo uu sheegay inay weerarkan kusoo beegtay xilli Madaxweynaha Soomaaliya uu ku suganyahay Puntland, taasoo uu tilmaamay inay carqalad ku tahay geedi socodka nabadda.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale xusay in arrintan tahay farogalin qaawaan oo lagu hayo xuduuda Puntland, isagoo xusay inaysan u dulqaadan doonin daandaansi ka dhan ah nabadgalyada iyo xasiloonida maamulkan mudada dheer kusoo jiray.
Hadalkan ayaa kusoo beegmay xilli Somaliland ay shaley la wareegtay deegaanka Tukaraq oo fariisin u ahaa ciidamo katirsan Puntland, xilli Madaxweyne Farmaajo iyo wafdi la socda ay xariga ka jarayeen garoonka General Maxamed Abshir Muuse ee magaalada Garoowe.
Sidoo kale Madaxweyne Gaas ayaa warkiisan kusoo beegay xilli shir waqti badan qaatay oo saxaafaddu dibada ka joogtay ay golaha wasiirada Puntland ku lahaayeen xarunta Madaxtooyada iyadoo la fillo in Wafdiga Farmaajo berri u amaba-baxaan magaalada Qardho ee gobolka Karkaar.
Maaha markii ugh horaysay xiisad dagaal dhex-marto maamullada Somaliland iyo Puntland oo ku murma gobollada Sool iyo Sanaag.